ဒါကိုမဖက်နဲ့ သိမှာစိုးလို့ပါတဲ့… | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Arts & Humanities » ဒါကိုမဖက်နဲ့ သိမှာစိုးလို့ပါတဲ့…	12
kophoe kaung has written 1 post in this blog.
View all posts by kophoe kaung →	Blog
ကြောင်လေး says: အိုးးးးးးးးးအဲလိုဂျီးလား………
တာတီး says: ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိနေတာမျိုးမို့ အသက်တစ်ရာမနေရ အမှုတစ်ရာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာ ဖြစ်မှာ ။
thar ag says: ၀င်ေ၇ာက်မှတ်သားသွားပါသည်
first last says: If this is right, very bad person on earth.
mamanoyar says: ဖတ်ပြီး မှတ်သွားပါတယ်ရှင်
မမ အညာသူ says: ဘာမန့်ရမယ်မသိလို.
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ဒါကိုမဖတ်နဲ့ သိမှာစိုးလို့တဲ့…
Khaing Khaing says: ဟယ် ….. မုံရွာဆိုပါလား နာ့အမျိုးတွေလက်တို့ထားမှ ဝေးဝေးရှောင်ဖို့အတွက် ………. ရန်ကုန်မှာလည်း ရှေ့နေတစ်ယောက်ရှိပါတယ် သူကအနုပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းကသူတစ်ယောက်ရဲ့အဖေပါ သူ့ကိုအမွေဆိုင်အိမ်ကိစ္စပြသနာဖြစ်လို့အပ်လိုက်တာ နောက်ဆုံးတရားလိုကအမှုနိုင်သွားပါတယ် ဒါပေမယ့် နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နံမည်ပဲကျန်ပြီး အိမ်ကြီးတစ်အိမ်လုံးကိုတော့ သူ့လက်ထဲထိုးအပ်လိုက်ရပါတယ် …..
ဇောက် ထိုး says: သူဟာ မကောင်းတာတွေလုပ်တော့ …အဲဒီသူ မကောင်းတဲ့သူဖြစ်သွားတာပေါ့…
နှင်းဆီ ငုံ says: အော် လူတွေ လူတွေ တရားကျဖို့ ကောင်းလိုက်တာနော် … ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်မှမသနား ၊ နောင်ဘ၀အတွက် ဆိုးကျိုးပဲရမယ့် ရိက္ခာအတွက် သိက္ခာများ အကျခံရတယ်လို့ …
နွေဦး says: အော်…တရားမရှိ တရားမသိတဲ့လူတွေကတော့
may flowers says: တစ်ဘ၀စာအတွက် လိမ်နည်း ၊ခိုးနည်း မျိုးစုံနဲ့ ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်း တော်တော်လေးကိုများလာကြတာ
Comments By Postအဟံ ပထမံ - ခရီးသည်ကြီး - padonmarမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - padonmar - ခရီးသည်ကြီးအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - padonmar - ခရီးသည်ကြီးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - ဦးဦးပါလေရာ - Ko chogyiယုံလား? - ဦးဦးပါလေရာ - အလင်း ဆက်Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - ဦးဦးပါလေရာ - ဦးဦးပါလေရာကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - Ko chogyi - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - parlayar 46 - padonmarငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - အလင်း ဆက် - padauk moeမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - အလင်း ဆက် - Ma Maကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - အလင်း ဆက် - TNAမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - အလင်း ဆက် - TheWinner Getprizeလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - Ma Maမင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moeနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - padauk moe - TNAပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်းမှ..... - မောင် ပေစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - မောင် ပေ - Mobile13ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - TNA - မောင် ပေEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities